ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ချက် ချီချေဝါ ဂါ ဂျာမန် စရာနန်တွန်ဂို စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီပီဒိုင် ဆက်ဆွာနာ ဆီလိုဇီ ဆွာဟီလီ တဆောန်ဂါ တရုတ် ကန်တုံ (ခေတ်သုံး) တရုတ် ကန်တုံ (ရှေးသုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ဘိုင်ကိုးလ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မာလဂက်စီ မာလာယာလမ် မီဇိုး မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လစ်သူယေးနီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ် အစ်ဘို အီတလီ အေးဝေး
ဘီစီခြောက်ရာစုတွင် ပါးရှားဘုရင်ကုရုသည် ဘုရားသခင့်လူတို့ကို ဗာဗုလုန်သုံ့ပန်းဘဝမှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထောင်နှင့်ချီသောသူတို့သည် ပျက်စီးယိုယွင်းလျက်ရှိသော ယေဟောဝါ၏ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုပြန်လာကြသူတို့၏စီးပွားရေးအခြေအနေမှာ မသေချာမရေရာဖြစ်ပြီး ရန်လိုသောအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများက ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဆောက်လုပ်သူအချို့တို့သည် အရေးကြီးလှသောထိုစီမံကိန်းကို ပြီးစီးနိုင်ပါမည်လောဟူ၍ စိုးရိမ်ခဲ့ကြ၏။
ယေဟောဝါသည် ဆောက်လုပ်သူတို့နှင့်အတူရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်ချစေရန် ပရောဖက်ဟဂ္ဂဲမှတစ်ဆင့် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ “လူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုလည်း ငါလှုပ်ဦးမည်။ လူမျိုးအပေါင်းတို့ နှစ်သက်ဖွယ်သောအရာသည်ရောက်၍ ဤအိမ်ကို ဘုန်းနှင့်ငါပြည့်စုံစေမည်” ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဆောက်လုပ်သူတို့၏စီးပွားရေး စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် ဟဂ္ဂဲသည် ဤသတင်းစကားကို ပြောဆိုခဲ့သည်– ‘ရွှေနှင့်ငွေကိုငါပိုင်သည်ဟု ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ယေဟောဝါမိန့်တော်မူ၏။’ (ဟဂ္ဂဲ ၂:၇-၉) ထိုအားပေးစကားများကို ဟဂ္ဂဲပြောဆိုပြီး ငါးနှစ်အတွင်းတွင် စီမံကိန်းပြီးဆုံးခဲ့လေသည်။—⁠ဧဇရ ၆:၁၃-၁၅။
များမကြာသေးမီက ယေဟောဝါ၏ဝတ်ပြုရေးနှင့်ဆက်နွှယ်သော သာ၍ကြီးမားသည့်စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြချိန်တွင် ဟဂ္ဂဲ၏စကားများက ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်များအား လှုံ့ဆော်ခဲ့၏။ ၁၈၇၉ ခုနှစ်၌ တည်ကြည်ပြီး သတိပညာရှိသောကျွန်အတန်းအစားသည် ထိုအချိန်က ဇိအုန်ကင်းမျှော်စင်နှင့် ခရစ်တော်ရောက်ရှိခြင်းသံတော်ဆင့် ဟုခေါ်သော ဤဂျာနယ်ကို စတင်ထုတ်ဝေရာ အောက်ပါဖော်ပြချက်ပါဝင်ခဲ့သည်– “ဤ ‘ဇိအုန်ကင်းမျှော်စင်’ ၏ကျောထောက်နောက်ခံမှာ ယေဟောဝါဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်၊ ဤသို့ယုံကြည်ထားသောကြောင့် လူတို့ထံမှ အထောက်အပံ့ကို မည်သည့်အခါမျှ တောင်းခံမည်မဟုတ်၊ အသနားခံမည်မဟုတ်။ ‘ရွှေနှင့်ငွေကို ငါပိုင်သည်’ ဟု မိန့်တော်မူသောအရှင်သည် လိုအပ်သောရန်ပုံငွေကို မပေးဘဲနေသည့်အခါ ထိုစာစောင်ရပ်ဆိုင်းရန် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယူမှတ်မည်။”
ကင်းမျှော်စင်စာစောင်ထုတ်ဝေခြင်းသည် တစ်ခါမျှ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ပထမဆုံးစာစောင်ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ စောင်ရေ ၆,၀၀၀ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယနေ့အချိန်တွင် ၁၆၁ ဘာသာဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် ပျမ်းမျှစောင်ရေ ၂၈,၅၇၈,၀၀၀ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်။ * ကင်းမျှော်စင်၏ တွဲဖက်မဂ္ဂဇင်းဖြစ်သော နိုးလော့! ကိုလည်း ၈၀ ဘာသာဖြင့် ပျမ်းမျှစောင်ရေ ၃၄,၂၆၇,၀၀၀ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ယေဟောဝါကို စကြဝဠာပိုင်သအုပ်စိုးရှင်အဖြစ် ချီးမြှင့်ဂုဏ်တင်ရန်နှင့် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကို ကြေညာရန်ဖြစ်သည့် ကင်းမျှော်စင်၏ ရည်မှန်းချက်ကဲ့သို့ ယေဟောဝါသက်သေများသည် စီမံကိန်းများစွာကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ (မဿဲ ၂၄:၁၄; ဗျာ. ၄:၁၁) ယနေ့ ယေဟောဝါသက်သေများ၏ခိုင်မြဲသောခံယူချက်မှာ ၁၈၇၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေသော ဤဂျာနယ်၏ကြေညာချက်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏လုပ်ငန်းကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားကြောင်း၊ ကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးသော စီမံကိန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေများ ရရှိကြလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် လက်တွေ့ကျကျပြောရလျှင် ယေဟောဝါသက်သေများ၏ဆောင်ရွက်မှုများကို မည်သို့ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သနည်း။ ကမ္ဘာတစ်ခွင်တွင် သတင်းကောင်းဟောပြောရန် မည်သို့သောစီမံကိန်းအမျိုးအစားများကို သူတို့ဆောင်ရွက်နေကြသနည်း။
ယေဟောဝါသက်သေများသည် လူထုရှေ့ဟောပြောကြသောအခါ “ဒီလိုဟောပြောတဲ့အတွက် လခရသလား” ဟူ၍အမေးခံရသည်မှာ သူတို့အတွက် အဆန်းမဟုတ်ပါ။ အဖြေကား သူတို့ မရပါ။ သူတို့၏အချိန်ကို အခမဲ့ပေးဆက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းဟောပြောသူတို့သည် ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်စိတ်၏လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ယေဟောဝါအကြောင်းနှင့် သာ၍ကောင်းသောအနာဂတ်ဆိုင်ရာ သမ္မာကျမ်းစာကတိတော်များအကြောင်းကို အခြားသူတို့အား ဟောပြောရာတွင် နာရီပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရာများနှင့် သတင်းကောင်းက သူတို့၏အသက်တာ၊ သဘောထားကို များစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်ကို ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကောင်းသောအရာများကို အခြားသူတို့အား ဝေမျှလိုကြသည်။ ထိုသို့ ပြုခြင်းဖြင့် ယေရှုဖော်ပြခဲ့သော ဤမူကို သူတို့လိုက်လျှောက် ခဲ့ကြသည်– “သင်တို့သည် အဖိုးမပေးဘဲ ကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြပြီဖြစ်၍ အဖိုးမခံဘဲပေးကမ်းကြလော့။” (မဿဲ ၁၀:၈) အမှန်တွင်၊ ယေဟောဝါနှင့် ယေရှုအတွက် သက်သေများဖြစ်လိုသော သူတို့၏ဆန္ဒက မိမိတို့၏ယုံကြည်ချက်များကို ရပ်ဝေး၌နေထိုင်သူတို့ကိုပင် ဝေမျှပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေများကို အသုံးပြုရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည်။—⁠ဟေရှာယ ၄၃:၁၀; တမန်တော် ၁:⁠၈။
ဤဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်စေရန်နှင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်စေရန် အသုံးပြုသည့် ပုံနှိပ်တိုက်များ၊ ရုံးများ၊ စည်းဝေးပွဲခန်းမများ၊ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုနေအိမ်များစသောအရာများက အကုန်အကျများစွာ လိုအပ်စေသည်။ အဘယ်မှ ငွေကြေးရရှိကြသနည်း။ ဤအရာအားလုံးအတွက် ငွေကြေးကို စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်သော အလှူငွေများမှ ရရှိကြသည်။ ယေဟောဝါသက်သေများသည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထောက်ပံ့ရန် အသင်းသားများထံမှ ငွေကြေးထည့်ဝင်ရန်အတင်းအကျပ်မတောင်းဆိုသည့်အပြင် သူတို့ဖြန့်ချိသောစာအုပ်စာတမ်းများအတွက် လူတို့ထံမှလည်း တန်ဖိုးမကောက်ခံကြပါ။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ယေဟောဝါသက်သေတို့၏ပညာပေးလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးရန် အလှူငွေထည့်ဝင်လိုပါက ယင်းကို ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း သတင်းကောင်းဟောပြောရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော ဘာသာပြန်ခြင်းကဏ္ဍတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သည်ကို လေ့လာကြည့်ကြစို့။
ဘာသာစကား ၄၃၇ မျိုးဖြင့် စာပေများထုတ်ဝေခြင်း
ယေဟောဝါသက်သေတို့၏စာပေများသည် နှစ်များတစ်လျှောက် ကမ္ဘာပေါ်၌ အများဆုံးဘာသာပြန်သောစာပေများတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ ဝေစာများ၊ ဘရိုရှာများ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့် စာအုပ်များကို ဘာသာစကား ၄၃၇ ဘာသာဖြင့် ပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။ မှန်ပါသည်၊ သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သော အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင် ဘာသာပြန်ခြင်းက ငွေကြေးအတော်အတန်လိုအပ်သည်။ ဘာသာပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
ယေဟောဝါသက်သေများ၏စာပေရေးရာ အယ်ဒီတာများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ခုအပြီးသတ်ပြီးနောက် ယင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ လေ့ကျင့်မှုခံယူထားသော ဘာသာပြန်အဖွဲ့များထံ အီလက်ထရွန်နစ်စနစ်ဖြင့် ပို့လိုက်သည်။ ဘာသာပြန်အဖွဲ့တိုင်းသည် ထုတ်ဝေမည့်ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ကြရန် တာဝန်ယူထားကြသည်။ သူတို့လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းတာဝန်အရေအတွက်နှင့် ပြန်ဆိုသည့်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ ထိုဘာသာပြန်အဖွဲ့များတွင် ၅ ယောက်မှ ၂၅ ယောက်ခန့်အထိ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားကြသည်။
ဘာသာပြန်ထားသည့်စာသားကို မှန်မမှန်စစ်ဆေးခြင်း၊ စာပြင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူရင်းတွင်ပါဝင်သည့် အယူအဆများအတိုင်း အတတ်နိုင်ဆုံး တိကျ၊ မှန်ကန်စွာ ဖော်ပြနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများစွာရှိ၏။ အထူးပြုဝေါဟာရကိုသုံးထားသော စာသားကို ပြန်ဆိုသည့်အခါ ဘာသာပြန်သူတို့နှင့် စာပြင်သူတို့သည် တိကျမှန်ကန်ကြောင်း သေချာစေရန် မူရင်းဘာသာစကား (အင်္ဂလိပ် သို့မဟုတ် ဒုတိယမူရင်းဘာသာစကား၊ ပြင်သစ်၊ ရုရှား သို့မဟုတ် စပိန်စသည့်) နှင့်ပြန်ဆိုဘာသာစကားတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စူးစမ်းလေ့လာမှု ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ၊ နိုးလော့! ပါဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် ပညာရပ် သို့မဟုတ် သမိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းကို ဆွေးနွေးထားသောအခါ များစွာသုတေသနပြုရန် လိုအပ်လာသည်။
ဘာသာပြန်သူများစွာသည် ယေဟောဝါသက်သေများ၏ဌာနခွဲရုံးများတွင် အချိန်ပြည့်ဖြစ်စေ၊ အချိန်ပိုင်းဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အခြားသူတို့မှာ ပြန်ဆိုသည့်ဘာသာစကားပြောဒေသများတွင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဘာသာပြန်သူတို့သည် သူတို့လုပ်ဆောင်မှုအတွက် အခကြေးငွေမရရှိပါ။ အချိန်ပြည့်ဘာသာပြန်သူတို့သည် နေစရာ၊ စားစရာနှင့် အခြေခံကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်အတွက် ထောက်ပံ့ကြေးအနည်းငယ်ကိုသာ ရရှိကြသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် သက်သေခံ ၂,၈၀၀ ခန့်သည် ဘာသာပြန်များအဖြစ် အမှုဆောင်ကြသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ယေဟောဝါသက်သေများ၏ဌာနခွဲရုံး ၉၈ ခုတွင် ဘာသာပြန်အဖွဲ့များ တည်ရှိသည်၊ သို့မဟုတ် အခြားနေရာများရှိအဖွဲ့များကို ကြီးကြပ်ပေးရသည်။ ဥပမာတစ်ခုပေးရသော်၊ ရုရှားဌာနခွဲရုံးသည် ဘာသာစကား ၃၀ ကျော်ကို ဘာသာပြန်ကြသောအချိန်ပြည့် သို့မဟုတ် အချိန်ပိုင်းဘာသာပြန်သူ ၂၃၀ ကျော်ကိုကြီးကြပ်ပေးသည်။ ယင်းတွင် ချူးဗတ်ရှ်၊ အော့စီးရှန်နှင့် ဝီးဂေါ်ကဲ့သို့သော လူသိနည်းသည့်ဘာသာစကားအချို့ပါဝင်သည်။
အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကို သင်ယူရန် ကြိုးစားခဲ့ဖူးသူတိုင်း သိရှိသကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသောအယူအဆများကို မှန်ကန်စွာပြန်ဆိုရန်မှာ လွယ်ကူသောကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မူရင်းစာသားပါ အချက်အလက်များနှင့် အယူအဆများကို မှန်ကန်စွာဖော်ပြရန်နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ဘာသာပြန်ဆိုချက်သည် ပြန်ဆိုဘာသာစကား၏ မူလအရေးအသားအလား သဘာဝကျကျဖတ်ရှုနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ပြီးမြောက်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်သည်။ ဘာသာပြန်လူသစ်များသည် ကျွမ်းကျင်သောဘာသာပြန်များဖြစ်လာရန် နှစ်ချီ၍အချိန်လိုပြီး ယေဟောဝါသက်သေများက သူတို့ကို အဆက်မပြတ်ပညာရေးအစီအစဉ်ဖြင့် လေ့ကျင့်ပေးသည်။ ကျွမ်းကျင်သောညီအစ်ကိုများသည် ဘာသာပြန်စွမ်းရည်တိုးတက်ခြင်းနှင့် ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုခြင်းတို့တွင် ကူညီရန် ဘာသာပြန်အဖွဲ့များထံ ရံဖန်ရံခါ သွားရောက်လည်ပတ်ကြသည်။
ဤလေ့ကျင့်ပေးမှုအစီအစဉ်သည် အကျိုးရလဒ်ကောင်းများကို ပေါ်ထွက်စေသည်။ ဥပမာ၊ ယေဟောဝါသက်သေများ၏ နီကာရာဂွာဌာနခွဲရုံးက ဤသို့သတင်းပေးပို့သည်– “ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်စကီတိုဘာသာပြန်များသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ မက္ကဆီကိုဌာနခွဲမှလာသော ကျွမ်းကျင်သည့်ညီအစ်ကိုတစ်ဦး၏လေ့ကျင့်ပေးမှုကို ဦးဆုံးအကြိမ်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ယင်းက ဘာသာပြန်သူတို့၏ဘာသာပြန်ဆိုပုံတွင် များစွာတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဘာသာပြန်အရည်အသွေး များစွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။”
လူတို့၏မိခင်ဘာသာစကားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ကျမ်းစာအခြေပြုစာပေများ ထုတ်ဝေရန် ကြိုးစားခြင်းသည် သူတို့၏နှလုံးကို ထိမိရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရည်ရွယ်သည့်အတိုင်း အတိအကျဖြစ်လာခဲ့၏။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားဘာသာဖြင့် ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန် ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစာ ထုတ်ဝေခဲ့သဖြင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားရှိ ယေဟောဝါသက်သေများ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြသည်။ ယင်းစာအုပ်သစ်အတွက် လေးမြတ်တန်ဖိုးထားကြောင်း တင်ပြလာသည့်စာအတော်များများကို လက်ခံရရှိကြောင်း ဘူလ်ဂေးရီးယားဌာနခွဲရုံးက သတင်းပို့သည်။ အသင်းတော်သားများက “အခုတော့ သမ္မာကျမ်းစာဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပဲ မဟုတ်တော့ဘူး၊ သူတို့ရဲ့နှလုံးကိုပါ အမှန်တကယ်ထိမိခဲ့တယ်” ဟူ၍ ပြောဆိုကြသည်။ ဆိုဖီယာမြို့ရှိ အကြီးအကဲတစ်ဦး ဤသို့ပြောခဲ့သည်– “သမ္မာကျမ်းစာကို နှစ်ပေါင်းများစွာဖတ်လာခဲ့ပါပြီ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်နားလည်ရလွယ်ကူပြီး နှလုံးကိုထိမိနိုင်တဲ့ဘာသာပြန်ကျမ်းကို တစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူး။” ထိုနည်းတူ၊ အယ်လ်ဘေးနီးယားရှိ ဒေသခံသက်သေခံတစ်ဦးသည် အယ်လ်ဘေးနီးယားဘာသာစကားဖြင့် ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန်ကျမ်းအပြည့်အစုံကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် ဤသို့ပြောခဲ့သည်– “ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်ဟာ အယ်လ်ဘေးနီးယားဘာသာစကားနဲ့ ဘယ်လောက်လှသလဲ! ယေဟောဝါက ကျွန်မတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနဲ့ ကျွန်မတို့ကိုပြောတာ ဘယ်လောက်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းသလဲ!”
ဘာသာပြန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနှင့် သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးပြန်ဆိုရန်မှာ နှစ်အတော်ကြာနိုင်သည်။ သို့သော် ရလဒ်အနေနှင့် သန်းပေါင်းများစွာတို့သည် ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်စကားတော်ကို ဦးဆုံးအကြိမ် အမှန်နားလည်နိုင်ပြီဖြစ်သဖြင့် ကြိုးစားအားထုတ်ရသမျှ အကျိုးနပ်သည်ဟု သင်ပြောမည်မဟုတ်လော။
‘ငါတို့သည် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဖြစ်ကြ၏’
မှန်ပါသည်၊ ဘာသာပြန်ခြင်းသည် သတင်းကောင်းကို ထိရောက်စွာဟောပြောရန် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများစွာထဲမှ တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာအခြေပြုစာပေများကို ရေးသားခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် ယေဟောဝါသက်သေများ၏ဌာနခွဲများ၊ တိုက်နယ်များ၊ အသင်းတော်များနှင့်ဆက်နွှယ်သော အခြားလုပ်ဆောင်မှုများစွာတို့က အတော်အတန်ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့် ငွေကြေးများကို လိုအပ်စေသည်။ သို့တိုင်၊ ဘုရားသခင့်လူတို့သည် ဤလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် “ကြည်ညိုသောစေတနာ” ဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ကို ပေးဆက်ကြသည်။ (ဆာလံ ၁၁၀:၃) ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အလှူငွေများ ထည့်ဝင်နိုင်ခြင်းကို အခွင့်အရေးအနေနှင့်ယူမှတ်ပြီး ဂုဏ်ယူစရာအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်၊ ရလဒ်အနေဖြင့် ယေဟောဝါသည် သူတို့အား မိမိ၏ “လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်များ” အဖြစ်ယူမှတ်တော်မူသည်။—⁠၁ ကောရိန္သု ၃:၅-၉၊ ကဘ။
“ရွှေနှင့်ငွေကို ငါပိုင်သည်” ဟုမိန့်ဆိုသောအရှင်သည် ကိုယ်တော်၏လုပ်ငန်းပြီးမြောက်အောင်မြင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့မှုများအပေါ် မူမတည်ပါ။ သို့တိုင်၊ “လူမျိုးအပေါင်းတို့အား” အသက်ကယ်မည့် အမှန်တရား ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးထည့်ဝင်လှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့် ယေဟောဝါ၏နာမတော် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ရေးတွင် ပါဝင်နိုင်သောအခွင့်ထူးပေးကာ မိမိ၏ကျေးကျွန်များကို ဂုဏ်တင်ခဲ့သည်။ (မဿဲ ၂၄:၁၄; ၂၈:၁၉၊ ၂၀) နောက်တစ်ဖန် ဘယ်တော့မှလုပ်ရတော့မည်မဟုတ်သည့် ဤလုပ်ငန်းကို ထောက်ပံ့ရန် သင်လှုံ့ဆော်မခံရပေလော။
^ အပိုဒ်၊5ဘာသာစကားစာရင်းကို ဤမဂ္ဂဇင်း၏စာမျက်နှာ ၂ တွင်ရှု။
[စာမျက်နှာ ၁၈ ပါ လေးထောင့်ကွက်]
“ယင်းစာစောင်များက ကျွန်မတို့ကို အလေးအနက်စဉ်းစားစေသည်”
၁၄ နှစ်အရွယ် မိန်းမငယ်လေးတစ်ဦးက ယေဟောဝါသက်သေများ၏ ကင်မရွန်းဌာနခွဲရုံးသို့ ဤသို့စားရေးခဲ့သည်– “တစ်နှစ်စာ ကျောင်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ယခင်နှစ်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် နှစ်အုပ်ကို ဖရန့်ငွေ ၂,၅၀၀ [အမေရိကန် ၅ ဒေါ်လာ] ဖြင့် ရောင်းခဲ့သည်။ ဤပိုက်ဆံကို ကျွန်မစုဆောင်ထားသော ဖရန့်ငွေ ၉၁၀ [အမေရိကန် ၁.၈၂ ဒေါ်လာ] နှင့်ပေါင်းပြီး လှူဒါန်းလိုက်ပါသည်။ သင်တို့လုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်မွန်ကို ဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ သင်တို့အား ကျွန်မတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ကင်းမျှော်စင်နှင့် နိုးလော့! မဂ္ဂဇင်းများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ယင်းစာစောင်များက ကျွန်မတို့ကို အလေးအနက်စဉ်းစားစေသည်။”
[စာမျက်နှာ ၁၈ ပါ လေးထောင့်ကွက်/ ရုပ်ပုံ]
ယေဟောဝါသက်သေများ၏မက္ကဆီကိုဌာနခွဲရုံးသည် ချီအာပါ့စ်ပြည်နယ်တွင်နေထိုင်သော မယ်နူအယ်လ်အမည်ရှိ ခြောက်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ် ထံမှ အောက်ပါစာတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မည်သို့စာရေးရမည်ကို မသိသောကြောင့် သူ၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးက သူ့အတွက် ရေးပေးခဲ့သည်။ မယ်နူအယ်လ် ဤသို့ပြောသည်– “သားရဲ့အဖွားက သားကို ဝက်မကြီးတစ်ကောင်ပေးခဲ့တယ်။ ဝက်ကလေးတွေ ပေါက်လာတဲ့အခါ အကောင်းဆုံးတစ်ကောင်ကိုရွေးပြီး ညီအစ်ကိုတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ မွေးမြူခဲ့တယ်။ အဲဒီဝက်ရောင်းလို့ ရတဲ့ငွေကို အလှူအဖြစ် မေတ္တာပါစွာ သားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ ဝက်ရဲ့အလေးချိန်ကတော့ ပေါင် ၂၂၀ ဖြစ်ပြီး ပီဆို ၁,၂၅၀ [အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁၀] ရပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီငွေကို ယေဟောဝါအတွက် အသုံးပြုပါ။”
“ဤငွေကို ကျမ်းစာဘာသာပြန်ရာတွင် အသုံးပြုပါ”
ယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသော ယေဟောဝါသက်သေများ၏ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ခရိုင်စည်းဝေးကြီးတွင် ကမ္ဘာသစ်ဘာသာပြန် ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းစာကို ယူကရိန်းဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ နောက်နေ့ စည်းဝေးကြီးအလှူငွေသေတ္တာထဲတွင် ဤစာကို တွေ့ရ၏– “ကျွန်မ အသက်ကိုးနှစ်ရှိပါပြီ။ ဂရိကျမ်းစာအတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမေက မောင်လေးနဲ့ ကျွန်မ ကျောင်းသွားဖို့ ကားခအတွက် ဒီပိုက်ဆံကို ပေးထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိုးမရွာလို့ ကျောင်းကို လမ်းလျှောက်သွားကြပြီး ဒီယူကရိန်းငွေ ၅၀ [အမေရိကန် ၁၀ ဒေါ်လာ] ကို စုထား လိုက်တယ်။ မောင်လေးနဲ့ ကျွန်မက ဒီပိုက်ဆံကို ယူကရိန်းဘာသာစကားနဲ့ သမ္မာကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံး ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်။”
[စာမျက်နှာ ၂၀၊ ၂၁ ပါ လေးထောင့်ကွက်]
အချို့သူများလှူဒါန်းရန် ရွေးချယ်ကြပုံ နည်းလမ်းများ
များစွာသောသူတို့သည် “ကမ္ဘာချီလုပ်ငန်းအတွက် အလှူငွေ—မဿဲ ၂၄:၁၄” ဟုရေးထားသော အလှူငွေသေတ္တာတွင် ထည့်ဝင်ရန် မိမိတို့၏ငွေကြေးများကို သီးသန့်ဖယ်ထားကြသည်။
အသင်းတော်များသည် ယင်းအလှူငွေများကို မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ ယေဟောဝါသက်သေများ၏ရုံးသို့ လစဉ်ပေးပို့ကြသည်။ စေတနာအလျောက်ထည့်ဝင်သော လှူဒါန်းငွေများကို Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Attention Treasurer’s Office, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483 သို့မဟုတ် သင့်နိုင်ငံကို တာဝန်ယူပေးရသော ဌာနခွဲရုံးသို့ တိုက်ရိုက်ပေးပို့နိုင်သည်။ ချက်လက်မှတ်များကို “ကင်းမျှော်စင်” သို့ပေးပို့သင့်သည်။ ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် အခြားတန်ဖိုးရှိအရာများကိုလည်း လှူဒါန်းနိုင်သည်။ ဤသို့ပေးပို့လှူဒါန်းရာတွင် လုံးလုံးလျားလျားလှူဒါန်းကြောင်း ဖော်ပြသည့် စာတိုကလေးပါ ထည့်ပေးသင့်သည်။
ကမ္ဘာချီလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုရန် ကင်းမျှော်စင်အသင်းထံ ငွေကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံထားနိုင်ပါသည်။သို့သော် လှူဒါန်းသူတောင်းခံလာပါက အလှူငွေကို ပြန်လည်ပေးအပ်ပါမည်။ ထပ်မံသိလိုပါက အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော လိပ်စာရှိ The Treasurer’s Office ကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။
ငွေကြေး လုံးလုံးလျားလျား ပေးအပ်ခြင်းအပြင် ကမ္ဘာချီလုပ်ငန်းကို အထောက်အကူပြုရန် အခြားပေးကမ်းနည်းများရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် အောက်ပါနည်းများပါဝင်သည်–
အာမခံ– ကင်းမျှော်စင်အသင်းအမည်ဖြင့် အသက်အာမခံကြေး ခံစားခွင့်များ၊ အငြိမ်းစားခံစားခွင့်များကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။
ဘဏ်စာရင်းများ– ဘဏ်ရှင်းတမ်းများ၊ ငွေစုစာအုပ်များ၊ အငြိမ်းစားခံစားခွင့်စာရင်းများကို ဒေသန္တရဘဏ်စည်းကမ်းများအရ ကင်းမျှော်စင်အသင်းထံ အပ်နှံ သို့မဟုတ် ကာယကံရှင်သေဆုံးမှ လွှဲပြောင်းပေးရန် စီစဉ်နိုင်သည်။
အစုရှယ်ယာလက်မှတ်နှင့် ငွေချေးစာချုပ်များ– အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များနှင့် ငွေချေးစာချုပ်များကို လုံးလုံးလျားလျား ပေးအပ်လှူဒါန်းနိုင်သည်။
အိမ်ရာအဆောက်အအုံများ– ရောင်းချနိုင်သော အိမ်ရာအဆောက်အအုံများကို လှူဒါန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုံးလုံးလျားလျားဖြစ်စေ၊ လှူဒါန်းသူ အသက်ရှင်နေသရွေ့ နေထိုင်ရန်အပိုင်းကို ချန်လှပ်၍ဖြစ်စေ ပေးအပ်လှူဒါန်းနိုင်သည်။ ဤသို့ပေးလှူရန် စာချုပ်စာတမ်းမပြုမီ သင့်နိုင်ငံမှ ဌာနခွဲရုံးကို အကြောင်းကြားပါ။
နှစ်စဉ် ထောက်ပံ့ကြေး– နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးသည် ငွေကြေး သို့မဟုတ် အာမခံပစ္စည်းများကို ကင်းမျှော်စင်အသင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေးသော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအတွက် လှူဒါန်းသူ သို့မဟုတ် လှူဒါန်းသူအမည် သတ်မှတ်ထားသော တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေအပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ထုတ်ပေးငွေကို တစ်သက်လုံး နှစ်စဉ်ရရှိသွားမည်။ လှူဒါန်းသူသည် နှစ်စဉ်ထောက်ပံ့ကြေး ဝင်ငွေခွန်မှ လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုငွေကို ရရှိသွားမည်။
သေတမ်းစာနှင့် လွှဲအပ်စာများ– ပစ္စည်းဥစ္စာ သို့မဟုတ် ငွေကြေးများကို ကင်းမျှော်စင်အသင်းသို့ တရားဝင်သေတမ်းစာဖြင့် အမွေပေးလှူဒါန်းနိုင်သည် သို့မဟုတ် လွှဲအပ်စာချုပ်တွင် ကင်းမျှော်စင်အသင်းက အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူအဖြစ် ပါဝင်စေနိုင်သည်။ ဤသို့ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကို လွှဲအပ်ရာတွင် အခွန်နှင့်ပတ်သက်သည့် အကျိုးအမြတ်တစ်စုံတစ်ရာကို ဖြစ်ထွန်းစေပေမည်။
“လှူဒါန်းရန်စီစဉ်ထားခြင်း” ဝေါဟာရက အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေသည့်အတိုင်း ဤသို့လှူဒါန်းသောနည်းများကို ပြုရာတွင် လှူဒါန်းသူဘက်မှ ကြိုတင်စီစဉ်ထားမှုအချို့ လိုအပ်ပေမည်။ လှူဒါန်းရန်စီစဉ်ထားသည့် နည်းတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ယေဟောဝါသက်သေများ၏ ကမ္ဘာချီလုပ်ငန်းကို အကျိုးပြုရန် ဆန္ဒရှိသူများအတွက် အကူအညီဖြစ်ဖို့ ကမ္ဘာချီဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်လုပ်ငန်းကို အကျိုးပြုဖို့ လှူဒါန်းရန် စီစဉ်ထားခြင်း ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည့် အင်္ဂလိပ်နှင့် စပိန်ဘာသာတို့ဖြင့် ဘရိုရှာကို အသင်းမက ပြင်ဆင်ပြီးခဲ့ပြီ။ မေတ္တာဖြင့်လွှဲအပ်သောပစ္စည်းများကို ယခု သို့မဟုတ် သေတမ်းစာဖြင့် ပေးအပ်သည့်နည်းအမျိုးမျိုးကို ဖော်ပြပေးရန် ဤဘရိုရှာကို ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဘရိုရှာကိုဖတ်ရှုပြီး ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် အခွန်အရ အကြံပေးသူများနှင့် ဆွေးနွေးပြီးနောက် ကမ္ဘာချီယေဟောဝါသက်သေများ၏ ဘာသာရေးနှင့် လူမှုရေးရာများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သူများစွာရှိခဲ့ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် တိုး၍ရရှိစေခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းဘရိုရှာကို လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာစီမံဌာနမှ တိုက်ရိုက်တောင်းယူနိုင်ပေမည်။
ထပ်ဆင့်သိလိုလျှင် အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာရှိ လှူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာစီမံဌာနသို့ စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့်နိုင်ငံရှိလုပ်ငန်းကို စီမံကွပ်ကဲသော ယေဟောဝါသက်သေများ၏ဌာနခွဲရုံးသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
က၀၇ ၁၁/၁ စာ. ၁၇-၂၁
ယေဟောဝါကို လုံးဝယုံကြည်ကိုးစားဖို့ သင်ယူခဲ့
ဩဗဒိ၊ ယောနနှင့် မိက္ခာကျမ်းတို့မှ ပေါ်လွင်ချက်များ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇
နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် နိုဝင်ဘာ ၁၊ ၂၀၀၇